Howlgal lagu diley Xubno ka tirsan Al-Shabaab – Radio Baidoa
Howlgal lagu diley Xubno ka tirsan Al-Shabaab
Ciidamadda Kumaandooska Xoogga Dalka ee Danab ayaa degaanka Leego ee degmada Walanweyn gobolka Shabeelaha hoose kasameeyay howlgal culus oo saraakiisha hoggaamineysay ay sheegeen inay bartilmaameedsadeen saldhigyo ay leeyihiin Al-Shabaab.
Taliyaha Guutada 16aad kumaandooska Xoogga Dalka Danab G/le Ismaaciil Cabdimaalik ayaa sheegay in howlgalkaas ay ku dileen 13 Xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab kuna sugnaa degaanka Leego oo kamid ah deegannada hoostaga degmada Walanweyn.
Gaashaanle Ismaaciil ayaa xusay in Ciidamadda Kumaandooska gobolada dalka ay kawadaan howlgalo dalka looga saarayo Al-Shabaab,isla markaana uu u jeedkiisu yahay inay kala wareegaan deegaannada ay ku sugan yihiin Gobolada dalka.
Si kastaba majirto dhankooda wax war ah oo kasoo baxay Al-Shabaab oo ku aadan Warka kasoo yeeray saraakiisha Ciidanka DANAB ee ah in howgal lagu diley Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Dowladda oo ka hadashay wararka sheegaya in Farmaajo tagayo Hargeyso